ओलीको सोच र चिन्तन नै सामन्ती छ
अष्टलक्ष्मी शाक्य काठमाडौं, ५ जेठ
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को स्थायी कमिटी बैठक हरेक ३ महिनामा बस्नुपर्ने प्रावधान छ । गत पुसमा बसेको स्थायी कमिटी नियमतः चैतमा बस्नुपर्ने हो तर ३ जेठसम्म पनि बस्न सकेको छैन ।
२५ गते बोलाएको स्थायी कमिटी बैठक विना कारण स्थगित भयो । त्यसपछि पुनः १ वैशाखमा स्थायी कमिटीको बैठक बोलाएको थियो । त्यो बैठक पनि कोरोना त्रासका कारण बैठक बस्नु १ घण्टा पहिला स्थगित गरियो ।
अब नेकपाको स्थायी कमिटी कहिले बस्छ भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन । स्थायी कमिटीका सदस्यहरूले नै हस्ताक्षर गरेर बैठक बोलाउन माग गर्दा पनि पार्टी नेतृत्व विशेष गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली त्यसबाट भागिरहनुभएको छ । यो उहाँको समस्याबाट भाग्ने प्रवृत्ति हो । यसले पार्टी र सरकार दुवैलाई राम्रो गर्दैन ।
अब पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठक कहिले बस्छ, केही अत्तोपत्तो छैन । आफ्नो मनमर्जीले एउटा वहाना बनाएर पार्टीका बैठक नबसाल्ने प्रवृत्ति ओलीमा छ ।
अहिले यो झन् बढी देखिएको छ । सत्तारुढ दलले चाहेमा ४४ जना स्थायी कमिटीको बैठक बोलाउन सक्दैन ?
संसद अधिवेशन बोलाउन सकिन्छ भने पार्टीको बैठक किन बस्न सक्दैन ? पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठक बस्न सक्दैन ? यो सब ओलीजीको वहानाबाजी हो ।
देशमा कालापानी र लिपुलेकको मुद्दा उठेको छ । यसबारेमा सरकारले के गर्दै छ ? के गर्नुपर्छ भन्ने सरसल्लाह पार्टी कमिटीसँग गर्न ओली नै चाहनुहुन्न । नेताहरूले राष्ट्रियताको विषयमा कुरा उठाउँछन्, त्यसको जवाफ दिनुपर्छ भनेर भाग्छन् । अध्यक्ष ओलीलाई पनि यही भएको हो ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आयो । हामीलाई थाहैै भएन । कुनै सुझाव मागिएन । आफ्नै पार्टीको सरकार हुँदा पनि कस्तो नीति तथा कार्यक्रम आउँदै छ भनेर थाहा नहुने अवस्था आयो ।
नीति तथा कार्यक्रम सरकारको हो तर प्रमुख हिस्सेदार पार्टी नै हो । यहाँ सरकारले के गर्छ, पार्टीलाई केही जानकारी हुँदैन । एकलौटी रूपमा सरकार चलेको छ । यसमाथि स्थायी कमिटीका नेताहरूले प्रश्न गर्छन् भनेर बैठक नै नबोलाई नीति तथा कार्यक्रम ल्याइयो । यो सरासर गलत भएको छ ।
अध्यक्षले बैठक नबसालेर पार्टी अस्तव्यस्त बनाउँदै छन् । पार्टीको कामकारबाही नै अस्तव्यस्त भएपछि पार्टी नै रहँदैन । पार्टी कमजोर भइरहेको छ ।
यो पार्टी ओली एक्लैले बनाएको होइन । शहीदको रगत, पसिना, कम्युनिस्ट नेता, कार्यकर्ताको बलिदानी, त्याग र तपस्याले यो पार्टी यहाँ पुगेको हो । पार्टी जोगाउने काम सबैको हो । यत्रो बलिदानी, त्याग र तपस्याबाट बनेको पार्टी सिध्याउने अधिकार अध्यक्ष ओलीलाई छैन ।
पार्टी बनाउन नेपाली जनताले धेरै मिहिनेत गरेका छन् । सहयोग गरेका छन् । यो पार्टी जनताको जगमा उठेको हो । अध्यक्ष भएपछि जे पनि गर्न पाइन्छ भन्ने हुँँदैन । पार्टीको विधि, विधानअनुसार चल्नुपर्छ ।
३ महिनामा बोलाउनुपर्ने बैठक स्थायी कमिटीका नेताहरूले नै बोलाउन माग गर्दा नबोलाउनु भनेको पार्टीको विधि, विधानलाई नै लत्याउनु हो ।
पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीको यो सामन्तवादी सोच हो । कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्षले यस्तो गरेको सुहाउँदैन । गणतन्त्रको नेतृत्व गरेको नेताको सोच व्यवहार सामन्तवादी हुनु राम्रो होइन । अध्यक्ष ओलीको सोच र चिन्तन सामन्तवादीको जस्तो छ । यो सोचले गणतन्त्र नेपालको नेतृत्व गर्न सुहाउँदैन ।
उहाँका काम र व्यवहारमा प्रश्न उठेपछि बैठक बोलाएर समस्याको समाधान गर्नुपर्ने हो तर उहाँ बैठकबाट र नेताहरूको प्रश्नबाट भाग्न खोज्दै हुनुहुन्छ ।
उहाँ पार्टी आफ्नै मात्र हो भनेझैँ एकलौटी रूपमा चल्न खोज्दै हुनुहुन्छ । यसले सिंगो पार्टी नै अलमलमा छ । अहिले लाग्छ, कस्तो अध्यक्ष बनाएछौँ हामीले । यत्रो ठूलो पार्टी बनाएका छौँ । तर, पार्टी विधि पद्धतिमा चल्दैन भने कस्तो होला ?
पार्टीको काम ठप्प पारेर कसरी देश चल्छ ? सत्ता सञ्चालन गरेको पार्टीनै यस्तो अवस्थामा पुगेपछि के हुन्छ देशको हालत ?
पार्टीका नेताहरूमाथि असमान व्यवहार गरिएको छ । पार्टी एकता हुँदा जुन उत्साह, उमङ्ग र जोश थियो, अहिले छैन । अहिले पार्टीमा निराशा छ । यो सबै नेताका कारण भएको हो । प्रमुख नेतृत्वको कारण भएको छ ।
अहिले नेतामाथि अथवा पार्टी नेतृत्वमाथि प्रश्न उठेको छ । यसको जवाफ नेतृत्वले दिनै पर्छ । यसका लागि बैठक बोलाउनुको विकल्प छैन ।
कुनै पनि वहानामा अब नेतृत्व नभागून् । पार्टीलाई जीवन्त राख्न बैठक बस्नै पर्छ । संसदमा सयौँ जना जम्मा हुन मिल्ने, ४४ जना बसेर बैठक गर्न नसकिने होइन । प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्षलाई बैठकबाट भाग्ने छुट छैन ।
(नेकपा नेता शाक्यसँग शिलापत्रकर्मी कृष्ण गिरीले गरेको कुराकानीमा आधारित)
प्रकाशित मिति: सोमबार, जेठ ५, २०७७, ०८:४६:००
रामेश्वर कमरेडलाई मन्त्री बन्न रोकेकै हो